Basil | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Tsy hoe manitra fotsiny, fa ilaina ihany koa: ny fanasitranana basile
Any amin'ny firenena maro, ny basil dia manafaka ireo toetra mahagaga, amin'ny fijerena azy io ho mariky ny fahatsarana mahasalama ao an-trano. Tsy misy zavatra hafahafa amin'izany, satria ny zavamaniry dia afaka mamono mikraoba ary manadio ny rivotra. Ny fampiasana basilika, ny akora simika ao amin'ny zavamaniry? Ny tombotsoa azo avy amin'ny basil dia azo tsaraina amin'ny famoronana ny orinasa. Ny raviny dia ahitana tanety sy mineraly, iankinan'ny ovy, lepidine, propsoline, saponins ary glycosides.
Fametrahana ny basilika, inona ireo karazana zavamaniry
Amin'ireo zavamaniry fantatra amin'ny olona, ​​manana toerana manokana ny basil. Ny anarany - Basilicum Ocimum, na Royal Scent - dia miteny ho azy: ny karazana basilika samihafa dia ahitana ôlônina, phytoncides, saponine ary manana toetra goavana sy aromatika. Fantatrao ve? Ny Basile Common (Eoropeana na Mediteraneana) dia nambolena nandritra ny 2500 taona mahery.
Ahoana no hampitombo ny basila amin'ny varavarankely
Maro ankehitriny no mikasa hamorona zaridaina marefo amin'ny varavarankely. Izy io dia fialamboly, singa mampiavaka ny lakozia, ary loharano ahodin-tsakafo vaovao ho an'ny sakafo. Basil dia tena mahavariana amin'ity tanjona ity, saingy mila mahafantatra ianao fa vahiny ity vahiny ity. Basil varimbazaha ho an'ny fambolena eo am-baravarankely Amin'ny ankapobeny, mba handaminana zaridaina iray avy amin'ny basilanja eo am-baravarankely, dia mety hisy karazany maro samihafa, saingy aleo mifidy fohy sy bunch.
Ahoana ny fomba fitsanganana Basilika ao an-trano
Basil dia herintaona isan-taona izay ampiasaina manerana izao tontolo izao ho toy ny zava-manitra, ary tsy amin'ny endriny ivelany fotsiny, fa amin'ny fahandroana ihany koa. Eny, eny, na dia ao amin'ny dikan-tsakafo maina aza, dia tena mahasalama sy mahasalama. Ny tena manan-danja dia ny mahafantatra ny fomba ampiasaina araka ny tokony ho izy ny basilina maina. Rehefa manangona basiliana amin'ny famoahana ny ririnina Mba hitazonana ny basilina maina amin'ny fofona ela, araka ny azo atao, dia mila mahafantatra ianao rehefa manolo-kevitra ny hanadiovana azy io amin'ny famonoana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Basil